Kemikari fomula VSi2. molecular uremu 107.11。 Metallic prismatic crystal. Kuwanda kwehukama kwaive 4.42. Insoluble mumvura inotonhorera uye Mvura inopisa, inogadziriswa mune hydrofluoric acid, isingasviki mune ethanol, ether uye acid. Maitiro: zvinoenderana nemutambo Iyo reshiyo yevanadium pentoxide nesilicon inogumira pa1200 ℃, kana ichave yakaenzana nesimbi Vanadium inogona kuwanikwa nekuita kwevanadium nesilicon pakakwirira tembiricha. Kushanda: inoshandiswa kudzivisa acid uye kupisa moto
1. Kugadzirira kwevanadium silicide yakatetepa mafirimu. Mutete wakaonda masilicides ane yakanaka midziyo inogona kugadzirwa zvakananga nekuiswa kwevanadium simbi ion ine danda rakakwirira. Nekuwedzera kweiyo danda kuwanda, iyo vanadium silicide chikamu inokura, uye jira kuramba Rs yeiyo yakatetepa silicide inoderera pachena. Kana danda ukobvu iri 25 μ A / cm2, RS inosvika padiki kukosha kwe22 ψ, izvo zvinoratidza kuti inoenderera silicide yakaumbwa. X-ray diffraction ongororo yakaratidza kuti ina mhando dzevanadium silicides, kusanganisira V3Si, V5Si3, V3Si5 uye VSi2, dzakaumbwa mune yakaisirwa dura. Mushure mekuwedzera, RS inoderera zviri pachena, iwo mashoma maRs anogona kudzikiswa kuita 9 ψ, uye iyo yekudzivirira inogona kuve yakaderera se72 μ ψ m, izvo zvinoratidza kuti mhando yevanadium silicide yakatetepa nhete yakagadziridzwa. Mushure mekukwirisa danda jekiseni uye annealing, iyo vanadium silicide chikamu inokura mberi. Yakakwira danda density jekiseni uye kwakanyanya tembiricha annealing (1200 ℃) stil.
2. Vanadium silicide rudzi rwemheremhere inotora zvedongo zvinhu. Iyo yepamusoro dura ine kurira kwekutora chivakwa yakaputirwa pamusoro pechiso cheiyo base layer.
Pashure: Manganese Silicide, MnSi
Zvadaro: Magnesium Silicide, Mg2Si
yakachena vanadium silicide yeupfu Mafekitori
yakachena vanadium silicide yeupfu Fekitori
yakachena vanadium silicide powder Mugadziri
vakanaka vanadium silicide Mafekitori
yakanakisa vanadium silicide Fekitori
vakanaka vanadium silicide Mugadziri
vakanaka vanadium silicide Vagadziri
yakanakisa vanadium silicide Mutengo
vakanaka vanadium silicide Quotes